Pump & Valve Parts Die Casting Manufacturer China, Custom Pump and Valve Parts - Minghe Casting
Pump Valve Parts Solutions By Casting & Cnc Machining
IATF 16949 CERTIFIED CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING HO AN'NY PUMP VALVE PARTS
Ny pump dia milina manatitra tsiranoka na tsindry fanerena. Izy io dia mamindra ny angovo mekanika an'ny mover voalohany na angovo ivelany hafa mankany amin'ilay ranoka hampitomboana ny angovo misy rano. Ny paompy dia ampiasaina amin'ny fitaterana ranon-javatra toy ny rano, solika, asidra miorina amin'ny asidra, emulsion, emulsion fampiatoana ary metaly ranoka, ary koa ranoka, fifangaroan'ny entona ary ranon-javatra misy vazo mihantona. Ny impeller dia napetraka ao amin'ny casing pump ary mifatotra amin'ny paompy paompy, izay entin'ny motera mivantana. Misy fantson-tsifotra ranon-javatra eo afovoan'ny trano fonenana. Ny ranoka dia miditra amin'ny paompy amin'ny alàlan'ny valizy ambany sy ny fantsom-pifoka. Ny seranana fivoahan'ny rano amin'ny casing pump dia mifandray amin'ny fantsom-panafahana.
Alohan'ny hanombohana ny paompy dia fenoina ranon-javatra entina ny casing pump; aorian'ny fanombohana, ny impeller dia entin'ny vatan-kazo hihodina amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, ary ny ranoka eo anelanelan'ny lelany dia tokony hiodina miaraka aminy koa. Eo ambanin'ny hetsiky ny hery afovoany, ny rano dia atsipy avy eo afovoan'ny mpanentana mankany amin'ny sisiny ivelany ary mahazo angovo, avelany haingam-pandeha ivelany ny sisin'ny ivelany amin'ny mpametaka volute pump. Ao amin'ny volute, mihena ny ranoka noho ny fanitarana tsikelikely ny fantsona mikoriana, ary mamadika ny ampahan'ny angovo kinetika ho angovo tsindry static, ary farany mikoriana mankany amin'ny fantsom-panafahana amin'ny tsindry avo kokoa ary alefa any amin'ny toerana ilana izany. . Rehefa mikoriana avy eo afovoan'ny impeller mankany amin'ny sisiny ivelany ny ranoka dia misy banga iray miforona eo afovoan'ny impeller. Satria ny tsindry ambonin'ny haavon'ny ranon'ny fitoeran-drano fitehirizana dia lehibe kokoa noho ny tsindry eo amin'ny fidiran'ny paompy, ny tsindry voatsindry tsy tapaka ao amin'ny impeller. Azo jerena fa raha mbola miodina tsy an-kijanona ny impeller dia hitroka sy hivoaka tsy tapaka ny ranoka.
Ny valizy pump dia teny iraisan'ny pumps sy valves. Izy io dia fitaovana indostrialy ampiasaina amin'ny fitaterana rano. Ny antony mampifamatotra ny paompy sy valves matetika dia ny fotoana. Raha atao teny hafa, dia matetika misy valves izay misy paompy, ary matetika dia ilaina ny paompy amin'ny toerana sasany. Ampiasaina amin'ny toerana itaterana ranon-javatra izy ireo. Mazava ho azy fa ny valve koa dia ampiasaina amin'ny lasantsy. Ny paompy vakumana dia misy ifandraisany amin'ny entona ihany koa.
Mifandraisa aminay ny injenieran'ny valizy paompy anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1. Fampiharana paompy valizy mahazatra.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana vahaolana maty ho azy ary ny fametahana machining cnc ho an'ny fampiharana Pump Valve marobe, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
Sokajy paompy: paompin-drano, paompy solika, paompy simika, paompy diaphragm, paompy maloto, paompy, paompy ao anaty rano, paompy maloto, paompy rendrika, paompy mifamaly, paompin-drivotra, paompin-drano fahana, paompy marobe, paompy, paompy sentra paompy-paompy, paompy misy kambana paompy, paompy manaingo tena, mampitombo paompy fanerena, paompy afo, paompy kitapom-batana tsy tapaka, paompin-drano madio, paompy slurry matevina, paompy fotaka, sns.
Fanasokajiana valve: valizy, valizy lolo, valvelobe eran-tany, valizy fanaraha-maso, vavahady vavahady, valizy manara-penitra, valizy famonoana, valizy oksizenina, valizy famokarana herinaratra, valizy fanalefahana, valizy fanalefahana, valizy vakumana, valizy solenoid, valizy mampihena ny tsindry, valizy mifehy ny tsindry , valizy zoro, valizy telo-lalana, valizy efatra-lalana, valizy maro-lalana, valizy duckbill, vavahady vavahady fisaka, valizy sahan-tsolika, valizy mihidy, valizy mivoaka, vavahady vavahady antsy, valizy mamoaka lavenona, milahatra fluorine valizy vita amin'ny fingotra, ary maro hafa
2.Nahoana no misafidy anay ho an'ny tetikasan'ny faritra valve pump
Minghe dia manana traikefa mihoatra ny 30 taona manampy ireo mpanamboatra valizy paompy hamorona singa mekanika mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Ny asan'ny casting casting an'i Minghe dia misy presse 40 manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 3000 taonina. Izahay dia mandray ny ampahany amin'ny valizy paompy mitaky be indrindra amin'ny volany, ny haben'ny ampahany ary ny fahasarotana. Noho ny fahaizanay momba ny injeniera sy ny maodely dia fantatry ny mpanjifanay aminay ho toy ny orinasa afaka mampihena ny fahasarotana amin'ny ampahany izahay ary hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana hahomby kokoa.
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny alimina amin'ny alàlan'ny paompy voafaritra tsara.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, dia manana ny fahaizany manamboatra ampahany amin'ny valizy paompy amin'ny habe rehetra isika, manomboka amin'ny fonony miditra amin'ny trano lehibe.
Izahay dia ITAF 16949 voamarina ary afaka manome ampahany amin'ny famokarana ho an'ny miaramila sy ny paompy valizy fampiharana.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny faritra Valve Pump
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ihany koa ny milina CNC, fanodinana famatsiam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ny faritra misy valizy paompy namboarina.
Fitaovana fanodinana pumping casting
Fitaovana fanariana fantsom-pasika
4.Ny fahaizan'ny famokarana mazava ho an'ny faritra valve pump
Fitaovana fanariana maty ho an'ny faritra valve pump:
Ny fahaizan'ny famitana ny haben'ny valin'ny paompy:
Fomba fanamboarana valizy paompy isan-karazany:
Machining Valve Pump CNC ary fampiharana fanariana maty:
Paompy famindran-toerana miabo / paompy impeller / paompy jet / paompy mitsivalana / paompy mitsivalana / paompy miompana tokana / paompy mitsivalana / paompy maotera / paompy turbinina / paompy diesel / paompy diaphragm;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanodinana valizy
Safidio ny serivisy fanodinana valiny pompana tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny valizy paompy dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerana an'izao tontolo izao. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanodinana valizy paompy anao.